converter များစုဝေးရာ(1) - Page 10 - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Xilisoft Video Converter Ultimate 6.5.5 Build-0246 + Serial
ဒါကတော့ အခုလောလောဆယ် နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ ဗားရှင်းလေးပါ။ အထဲမှာ Serial ပါ,ပါတယ်။ မိသားစုဝင်များ လိုအပ်ယင်သုံးနိုင်အောင် တင်ပေးလိုက်တာပါခင်ဗျာ။ သူ့ထဲမှာတော့ Setup file ကော၊ Crack ကော ပါ,ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဆီမှာတော့ Crack လုပ်စရာမလိုပဲ Serial နဲ့တင် ရသွားပါတယ်။ အဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ။
Xilisoft Video Converter Ultimate 6.5.5 Build-0246 + Crack
ချစ်သမီး, ဖန်ဆင်းရှင်, ရုပ်ဆိုး, မောင်ပေါ်ဦး, အောင်လွင်ဦး, g00gle, goldstar, jsmith201012, KznT, minthumon, zo
ပို့စ်6ခုအတွက် 24 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
convector တွေ တစ်ခုမှ download လုပ်တာမရဘူးဖြစ်နေတယ်။
ကျေးဇူးပြုပြီး download လုပ်ပြီးသား ဖိုင်ရှိလျှင် jjclubber@gmail.com ကို ပို့ပေးနိုင်ရင် အဆင်ပြေမှာပါ။
အဓိက FLV to all format ကိုလိုချင်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ရဲသော် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
goldstar, thein zaw min, zo
Find More Posts by ရဲသော်
Format Factory ဒေါင်းလုပ်လင့်က ကောင်းပါတယ်ဗျ။ ဒီအတိုင်းမရရင် မပွင့်ရင်တော့ ကျော်ခွ ဖွင့်ကြည့်ပါ။ ဒေါင်းလို့လဲ ရပါတယ်။ လင့်မသေသေးပါဘူး။ ကွန်နက်ရှင်ကောင်းရင်တော့ ဒေါင်းပြီး မေးလ်ကနေ ပို့ပေးလိုက်ပါ့မယ်။ နောက်တစ်ခေါက်လောက် ဒေါင်းဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါဦးခင်ဗျာ။ အဆင်ပြေပါစေ။
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ blackNwhite အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ရုပ်ဆိုး, arkaraung, bagothar85, g00gle, goldstar, KznT, thein zaw min, zo
Xilisoft Video Converter Ultimate 6.6.0 Build-0623 Final + Serials
အခုလောလောဆယ် နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ ဗားရှင်းလေးကို Serial လေးနဲ့တွေ့လို့ လိုအပ်တဲ့ မိသားစုဝင်များ အသုံးပြုနိုင်အောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. အဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ..
$ညိုမင်းလွင်$, ပုထုဇဉ်, ဖန်ဆင်းရှင်, ရုပ်ဆိုး, လီယိုနာဒို, အေးမင်းမောင်, နိုးတူး, amaung344, g00gle, goldstar, thein zaw min, zo
ကျွန်တော် Xilisoft Video Converter 5.1.18.1211 လေးဒေါင်းထားပါတယ်
သူရဲ့ crack file ဒေါင်းမရလို့
no such file တဲ့
လုပ်ပါအုံးအစ်ကို၊ ညီ၊ အစ်မ၊ ညီမ တို့ရေ
Last edited by လီယိုနာဒို; 14-07-2011 at 01:06 AM..
ရုပ်ဆိုး, အေးမင်းမောင်, zo
14-07-2011, 07:00 AM
ကျွန်တော့်မှာရှိတဲ့ Video Converter Portable လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။Portable လေးဆိုတော့သုံး၇
တာလဲအဆင်ပြေပါတယ်။ဒီကောင်လေးက Function တော်တော်များများကို Convert လုပ်ပေးနိုင်တာလဲ
တွေ့ ၇ပါတယ်။MP-3 , MP-4 , SWF ဖိုင်တွေသာမကပဲ ipod , iphone , ipad , Blackberry , Mobile Phone
စတဲ့ Function တော်တော်များများကိုလည်း Convert လုပ်ပေးတာတွေ့ ၇ပါတယ်.။သီချင်း File
1.အ၇င်ဆုံး Video Converter Portable လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ပြီး၇င်ကျွန်တော်အောက်ကပုံလေးမှာပြထား
တဲ့အတိုင်း Add File ကနေပြီးမိမိတို့ Convert လုပ်ချင်တဲ့ Video File လေးကိုေ၇ွးလိုက်ပါ။
2.Video File ထည့်ပြီးပြီဆို၇င်ကျွန်တော်တို့ Convert လုပ်ချင်တဲ့အမျိုးအစားကိုအောက်ကပုံလေးမှာပြထား
တဲ့အတိုင်း Profile အောက်အကွက်လေးကိုနှိပ်ပြီးစိတ်ကြိုက်ေ၇ွးလို့၇ပါတယ်.။
3.မိမိတို့ပြောင်းချင်တဲ့ File ဆိုဒ်ကိုေ၇ွးပြီးပြီဆို၇င်အောက်ကပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Convert ဆိုတာလေးကို
နှိပ်လိုက်ပါ။သူက License Code တောင်းပါလိမ့်မယ်။Remind Me leater ကိုနှိပ်လိုက်ပါ.။ပြီး၇င်ခဏ
4.Video File ကို Convert လုပ်တာပြီးပြီဆို၇င်ကျွန်တို့ My Computer ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ပြီး၇င် Videos ထဲမှာ
ကျွန်တော်တို့ Convert လုပ်ထားတဲ့ Video Files လေးကို Save ထားတာတွေ့ ၇ပါလိမ့်မယ်.။
ကျွန်တော် Mediafire ကနေတင်ပေးထားပါတယ်..။
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ အေးမင်းမောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မိုးကောင်းကင်, ရုပ်ဆိုး, လီယိုနာဒို, နေမင်းမောင်, bagothar85, g00gle, goldstar, hellboy, zo
မောင်တေဇာဝင်း ခင်ဗျ ကျွန်တော်ကအခုမှရာက်ဖူးတာပါ တကယ်ကိုအရမ်းစုံပါတယ်ကျွန်ကINTERNET သုံးတာမကြာသေးတော.WEBSITE ကောင်းလေးတွေရှိရင်Mail ပို.ပေးပါလားနောက်ပြီးပိတ်ထားတာကိုဖွင်.နည်းလေးတွေပါပို.ပေးပါနော်အကူညီတောင်းတာပါနော်
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ကျော်သူရ၀င်းpnp အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ရုပ်ဆိုး, ကျော်တိုး, zo
Find More Posts by ကျော်သူရ၀င်းpnp
15-07-2011, 09:21 PM
Originally Posted by ကျော်သူရ၀င်းpnp
ဘာ site ကိုပြောတာလဲဆိုမှပြောလို့ ရကြပါမယ်..နည်းပညာလား..software လား
game လား စာပေလား ..ဘာာသရေးလား..အစုံပေါ့ဗျ..သူ့လိုင်းနဲ့ သူရှိကြတာ
ခြင်တာ ဖိုရမ်တွေလောက်ဘယ်website မှမကောင်းပါ
မိုးကောင်းကင်, ရုပ်ဆိုး, နေမင်းမောင်, g00gle, KZaw, zo
13-08-2011, 10:55 PM
ပို့စ်5ခုအတွက် 12 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
hello ..i wanna FLV to MPEG converter full version,,any one,,please.....................................................
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ kokonay အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by kokonay
Originally Posted by kokonay
ဒီထဲမှာရှိတဲ့ Video Converter တော်တော်များများက FLV ကနေ MPEG ကို ပြောင်းလို့ရပါတယ်.. ကျွန်တော်ကတော့ Xilisoft Video Converter ကို သဘောကျပါတယ်.. ဒီပိုစ့်အပေါ်လေးမှာတင် ကိုအေးမင်းမောင်ကော၊ ကျွန်တော်ကော တင်ပေးထားတာလေးတွေ ရှိပါတယ်.. ကျွန်တော် တင်ပေးထားတဲ့ထဲမှာ Serial ပါ,ပါတယ်ခင်ဗျာ.. တစ်ခုရှိတာက အခုနောက်ပိုင်း Serial နဲ့ Software တော်တော်များများက Serial ကို Blocked လိုက်ကြတာ များပါတယ်.. အဲဒါကြောင့် လိုလိုမယ်မယ် ကျွန်တော် ဒီနေရာလေးမှာ ပြောထားတဲ့အတိုင်း နမူနာယူပြီး Serial မထည့်ခင် Firewall နဲ့ အယင် Block ပြီးမှ Serial ကိုထည့်ပါ.. အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ...
စနိုးလေး, ရုပ်ဆိုး, amaung344, arkaraung, bonge, g00gle, goldstar, zo
ဒါကတော့ စနိုးသုံးနေကျ conveter လေးပါ တော်တော်များများ ပြောင်းလို့ရပါတယ်ရှင် အဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်ပါတယ် အပေါ်မှာ အကို bogother လည်း ပြောပေးထားပါတယ် စနိုးတင်ပေးတာကတော့ format factory ပါ အဆင်ပြေပါစေရှင်
ဂျာကြီး, ရုပ်ဆိုး, arkaraung, bagothar85, bonge, g00gle, goldstar, Lwin Thu, zo
အပေါ်မှာလဲ ကိုပဲခူးနဲ့မစနိုးလေးတို့ ပြောပြပြီးပြီခင်ဗျ.. ကိုပဲခူးနဲ့ မစနိုးလေးတို့ ပြောတာနဲ့တင်အဆင်ပြေနေပါပြီ နောက်ထပ်softwareလေးတွေ စမ်းချင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ကလင့်လေးတွေလဲ ဖတ်ကြည့်ပါအုံးလား ပိုစုံသွားတာပေါ့
Last edited by arkaraung; 13-08-2011 at 11:25 PM..
စနိုးလေး, bagothar85, bonge, g00gle, goldstar, Lwin Thu, zo
ကျွှန်တော်အခုတင်ပေးမဲ့software ကတော့..ps2 ဂိမ်းသမားအတွက်ပါ...အရင်ပို့တွေတင်ပြီးသားရှီဲ့ခဲ့ပြီဆိုရင်လည်း
ပြီဆိုတာနဲ့PS2ဂိမ်းခွေကိုကွန်ပျူတာထဲထဲ့ပြီးဖိုင်ပြောင်း၇မှာဖြစ်ပါတယ်...Fileထဲကopenထဲကိုဝင်ပြီး(ဂိမ်းဖိုင်ကိုထဲလိုက်တာနဲ့ဘောက်တစ်ခုကြလာပါလိမ့်မယ်...အဲဒီထဲကအောက်ဆုံးမှာရှီတဲ့...GAME နဲု့ISOဆိုတာမှာGAMEဆိုတာကို
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ thuya အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စနိုးလေး, မျိုးဟန်ထက်, bagothar85, bonge, Lwin Thu, phyomyintthein, PyaitSone, zo
VCR file type ကို MP4 ပြောင်းလို.ရတဲ.ဆော.ဝဲလေးများရှိရင် ကျနော်.ကို ကူညီပါဦးဗျာ
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ naywin အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by naywin
ပို့စ် 15 ခုအတွက် 41 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Xilisoft Video Converter v7.0.0 + Crack | 40 Mb
အသုံးပြုနည်းတော့ အထူးတလည်ရှင်းပြမနေတော့ပါဘူး အောက်ကလင့်မှာဆွဲပီးသုံးကြည့်လိုက်ပါတော့
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ godfather.mcm အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by godfather.mcm
Total Video Converter HD v3.71 | 15Mb
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ godfather.mcm အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ရုပ်ဆိုး, bagothar85, tu tu
ImTOO Video Converter 7.x
3herosoft Video Converter 3.8.5
bagothar85, Lwin Thu
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ godfather.mcm အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
i want to convert VLC to Mp3. which software i can use? pls help me. :)
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ mghtwe405 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
အကိုရေ အရင်လ 27 ရက်နေ့ကတည်းက မေးထားတာဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ ကြာသွားပြီ ခင်ဗျာ စိတ်မရှိပါနဲ့ ....အခု ကျနော်သုံးနေတဲ့ converter လေးကိုပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် အသုံးပြုရတာလည်းလွယ်ကူပါတယ်ခင်ဗျာ... <<လင့်နေရာလေးမှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ (20 MB)လောက်ရှိပါတယ်...ပုံလေးနဲ့ ပြပေးလိုက်ပါတယ်
ဒါလေးကလဲ converter software လေးပါပဲ ...ဒီကောင်လေး ကတော့ Video File တွေကို convert လုပ်ခြင်း ၊ split လုပ်ဆောင်ခြင်း ၊ burn ခြင်း စတာတွေကို ကို လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ Video Convert Master software လေး ဖြစ်ပါတယ်...Type တွေကတော့ AVI, MPEG, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, VCD, DVD, SVCD, RMVB, RM, WMV တို့အပြင် ကျန်တဲ့ file type တော်တော်များများကိုလည်း ပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ် .... စိတ်ကြိုက်အသုံးပြုနိုင်အောင် Serial Key ပါထည့်သွင်းပေး ထားပါတယ်....
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ ကျနော် ကိုဆိုးပေဆီက ယူပြီး တင်ပေးထားတာပါ
ရုပ်ဆိုး, arkaraung, g00gle, zo
ကျွန်တော်သုံးဖူးသမျှ Converter တွေမှာအကောင်းဆုံးလေးပါ၊ Converter တွေဟာကောင်းပေမဲ့သူ့ဟာနဲ့ သူအားနဲချက်လေးတွေရှိပါတယ်
ဒီကောင်လေးကတော့လုံးဝအပြစ်မတွေ့ပါဘူး ၊total ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လိုက်အောင် ဘာလာလာ အကုန်ကိုပြောင်းရပါတယ်၊၊
protable လဲရှိပါတယ် windows7နဲ့သိပ်အဆင်မပြေပါဘူး
၁။ အရင်ဆုံး ဆော့လ်ဝဲကို Install လုပ်လိုက်ပါ ပြီးလို့ ဆော့လ်ဝဲ ဖွင့်လာရင် ပြန်ပိတ်လိုက်ပါ
၂။ ဖိုင်ထည်းမှာ ရှိတဲ့ ( crack ) ဆိုတဲ့ ဖိုင်အနီလေးကိုဖွင့်လိုက်ပါ
၃။ (All.dll) ဆိုတဲ့ရှိပါတယ် Copy ကူးလိုက်ပါ ပြီးရင်
၄။ ( C:\_Program Files\_Aiseesoft Studio\_Aiseesoft Total Video Converter\_dll ) အဲ့မှာသွားပြီး Paste လိုက်ပါ
Confirm File Replace လို့မေးရင် တစ်ခုခုမေးရင်ပေါ့ ( yes ) ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီး
အားသာချက်တစ်ခုက အချိန်မပေးရတာပဲ ၊ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာဆိုရင် မြန်မာတွေလူတိုင်းဖုန်းရှိတော့ သီချင်း ၈၀လောက်ပါတဲ့
DVD ခွေတွေကို mp3 အဖြစ်ပြောင်းပြီး ဖုန်းထဲထည့်ခိုင်းတယ် ၊ အလုပ်ချိန်နီးနေရင် ဖိုင်တွေအကုန် ပေါင်းထည့်ပြီး
သူ့အလုပ်ပြီးရင် သူ့ဘာသာ ကွန်ပြူတာပိတ်ခိုင်းလို့ရတယ်၊နောက် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အပိုင်းလေးတွေ ညှပ်ယူပြီး Rang tone လုပ်တာတို့
ကောင်းခန်းလေးပဲယူတာတို့ ၊ ဇာတ်ဝင်သီချင်းတွေယူတာတို့လုပ်ရတယ်၊ သုံးကြည့်ပါ ၊ကြိုက်မှာပါ ၊ MB ကလဲ7လောက်ပါပဲ ၊အသုံးပြု
နည်း အခက်ခဲရှိရင်မေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။ အောက်မှာဒေါင်းပါ ။
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ ကျော်တိုး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ရုပ်ဆိုး, မြန်အောင်သား, arkaraung, bagothar85, g00gle, tu tu, zo
အင်တာနက်ပေါ်က Flash Song တွေကို MP3 ပြောင်ကြမယ်
ဒီးဟာလေကလဲ အားလုံးအတွက်အစင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်..ဘာကြောင်လဲဆိုတော့ သီချင်းရှာရတာ အခက်ခဲရှိတယ်ဆိုရင်လည်း Flash Song တွေ များပါတယ်..သီချင်းတွေကို ဖုန်းထဲထည့်ဖို့MP3 ပြန်ပြောင်းချင်ရယ်ရတယ်...အရင်ဆုံး flash song သီချင်းတွေကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပါ ပြီးရင် ပုံထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်း
ဆက်လုပ်သွားရင် အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်..အမှားအယွန်ပါရင်လဲ ခွင့်လွက်ပါ...
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ မိုးတိန် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
arkaraung, bagothar85, g00gle, zo
အကိုကျော်တိုးရေ ဆောဖ်ဝဲက ဒေါင်းစရာမရှိဘူးလို့ပြောနေတယ်ဗျ။ ထပ်တင်ပေးပါအုံးဗျာ။ လာခိုင်းယင်လဲ လုပ်ပေးလို့ရအောင်ပေါ့။
Originally Posted by ကိုကြီးထွန်း
AiseeSoft Total Video Converter 6.2.32 Portable mediafire နဲ့ယူလိုက်ပါ
$ညိုမင်းလွင်$, arkaraung, tu tu, zo
အကိုရေ usb removecontero နဲ့စော့လို့ရလား ps2ကို
Find More Posts by ခိုင်မြဲ
Video to GIF Animation Converter for pc
ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကို Animation GIF ဓာတ်ပုံဖိုင်ပြောင်းချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် အောက်လင့်မှာ ရယူနိုင်ပါတယ်။